(27) Sunny 16 Rule ဓါတ်ပုံ ပညာ ရပ်ဆိုင်ရာ မှတ်စု (၂ရ)
နေရောင်တောက်တောက် အောက်တွင် Apreture (၁၆ ) ဖြင့်
By Soe Haling
Sunny 16 Rule သည် Light Meter မရှိဘဲ ရိုက်သည့် နည်း ဖြစ်သည်။ နေရောင် တောက်တောက်အောက်တွင် Aperture ကို 16 တွင်ထားကာ သင့်တော်ရာ ISO အမှတ်နှင့် Shutter Speed တို့ ကို တွဲသုံးသည့် နည်း ဖြစ်သည်။ ၄င်း နည်းမှာ နေရောင် တောက်တောက်အောက်တွင် Aperture ကို 16 ဖွင့်ထားကာ ISO 100 နှင့် ရိုက်ပါက Shutter Speed ကို 1/100 သို့ မဟုတ် အနီး စပ်ဆုံး 1/125 ထား၍ သော် လည်းကောင်း၊ ISO 200 ထားပါက Shutter Speed ကို 1/200 ထား၍ သော်လည်းကောင်း ရိုက်သည့် နည်း ဖြစ်သည်။ ISO 500 ထားပါက Shutter Speed သည် 1/500 ဖြစ်လာမည်။ ISO အမှတ်ကို Shutter Speed ၏ ပိုင်းခြေ ( အပိုင်းဂဏန်း ၏ အောက်ခြေ ကိန်း) အဖြစ် ထားသည့် နည်းဖြစ်သည်။
အထက်ပါပုံ မှာ ကင်မရာတွင် ခေတ်မှီ Light Meter မရှိ သေးသော ခေတ် ၁၉၄၅ ခုနှစ်က Sunny 16 Rule ဖြင့် Houston Texas တွင် ရိုက် ထားသည့် ပုံ ဖြစ်သည်။
ဤ နည်းစနစ်သည် ကင်မရာအများစု ၏ Firmware များတွင် တွက်ချက် ထားသည့် ရောင်ပြန် အလင်း (Reflection Light )ကို ယူကာ တွက်ချက်ထားသည့် တွက်ချက် နည်း မဟုတ်ဘဲ တိုက်ရိုက် ထိတွေ့သည့် အလင်းရောင် အပေါ် အခြေခံ ကာ တွက် ချက် ထားသည့် နည်း ဖြစ်သဖြင့် ပို၍ တိကျသည်ဟု ဆိုကြသည်။
Light Meter သည် တိကျမှု မရှိသည်များ လည်း ရှိတတ်သည်။ အလွန်ဖြူသော နှင်းများ၊ အလွန်မှောင်သော နေရာများ၊ နှင့် လ ကို ရိုက်သည့် အချိန်များတွင် Light Meter သည် မှန်ကန် စွာ တွက်ချက် မှု မရှိတော့ သည်ကို တွေ့ ရသည်။ ဤကဲ့ သို့ အခြေအနေမျိုးတွင် Sunny 16 Rule က ပို အသုံးတည့်သည်။
နေရောင်ချည် သည် နံနက် ၁၀ နာရီနှင့် ညနေ ၅ နာရီ အကြားတွင် နေရာအားလုံး သို့ ညီမျှစွာ ကျရောက်သည်။ အဆိုပါ အချိန် တွင် ကင်မရာ Setting ကို Sunny 16 Rule နှင့် ချိန် ကိုက်ပြီးပါက တိမ် အုပ်နေသည့် အချိန်မျိုး ၊ မှုန် မှိုင်းနေသည့် အချိန် မျိုးအတွက် Aperture နှင့် Shutter Speed တို့ ကို အထိုးအလျှော့ လုပ်ကာ ရိုက်၍ လည်း ရသည်။
Sunny 16 Rule ဟု ဆိုသဖြင့် Aperture ကို 16 သာ အမြဲတန်း ထားရမည် ဟုမဆိုလို။ Aperture ကို Stop တစ်ခုခြင်းစီ ပြောင်းသွားပြီး ယင်း နှင့် လိုက်လျှော ညီထွေ ရှိသည့် Shutter Speed ကိုလည်း ပြောင်းပေးကာ လည်း ရိုက်နိုင် သည်။
- နေရောင် အောက်တွင် Sunny 16 Rule အရ Aperture 16, ISO -100, shutter Speed မှာ 1/ISO ဖြစ်သည့် 1/100 Secs. ဖြင့် ရိုက်နိုင်သည်။
- အကယ်၍ နေရောင် တောက်တောက် မဟုတ်ဘဲ မှုန် မှိုင်းလာကာ အရိပ်ကို တိတိ ပပ မဟုတ်ဘဲ မြင်ရုံသာ မြင်ရနိုင်သည့် အနေအထားတွင် မူ Aperture ကို 16 မှ One Stop လျှော့ ၍ Aperture 11 သို့ ပြောင်းကာ အလင်း ကို ပိုဖွင့်ပေးရန် လိုသည်။ Shutter Speed မှာ 1/ISO ပင်ဖြစ်သည်။
- အကယ်၍ မိုး အုံ့ နေ၍ အလင်းရောင်သည် အရိပ်ကို ခတ်ပြပြသာ မြင်ရသည့် အလင်းရောင် အခြေအနေ မျိုးတွင် မူ Sunny 16 Rule ၏ Aperture 16 မှ နှစ်ဆင့် လျှော့ကာ Aperture 8 သို့ ပြောင်းပေးပါ။ Shutter Speed မှာမူ 1/ISO ပင်ဖြစ် သည်။
- အရိပ် ကိုပင် မမြင်နိုင်လောက်သည့် တိမ်ဖုံးသည့် အချိန်မျိုးတွင် မူ Aperture 16 မှ သုံးဆင့် လျှော့ကာ Aperture 5.6 သို့ ပြောင်းပေးပါ။ Shutter Speed မှာမူ 1/ISO ပင်ဖြစ်သည်။
အလင်းရောင် အ၀င် နည်း လာသည်ကို Aperture ချဲ့ ပေးခြင်းဖြင့် ပြန်၍ ညှိပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
အထက်ပါ နည်း များမှာ Guiding Line သဘော မျှ သာ ဖြစ်သည်။ နေရာ တိုင်း ကွက် တိယူ၍ မရ နိုင်သည်ကိုသတ်ပြု ရန် လိုပါသည်။
အထက်ပါ ပုံကဲ့သို့ တောက်ပနေသည့် နှင်း ပေါ်တွင် ရိုက်ရာတွင် အလင်း ရောင် ကို Sunny 16 Rule ဖြင့် ကွက်တိထားကာ တွက် ၍ မရ သည် ကိုတွေ့ ရသည်။
အဆိုပါပုံကို ရိုက်သည့် Data မှာ f-11, Shutter speed 1/50, ISO 100 ဖြစ်သည်။ Setting လုပ်ထားသည့် Shutter Speed 1/50 တွင် Aperture ကို f-11 ဖွင့်ထားသည်မှာ စင်စစ်အားဖြင့် ယင်း Aperture နှင့် shutter Speed နှစ်ခုပေါင်း၏ Setting သည် လက်ရှိ ပတ်ဝန်းကျင်၏ အလင်းရောင်အရ လိုအပ်သည် ထက် Two-Stop ပို၍ နေသည်။
သို့သော် Ski သမားများ၏ မျက်နှာ သည် မှောင်ရိပ် ကျနေသည့် အတွက် ဤ ကဲ့ သို့ Two-Stop ပိုဖွင့်ပေးရခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နှင်းဖုံးနေသည့် အချိန်တွင် Shade ကျ နေသည် Subject ကို ရိုက်ပါက f-11, Shutter Speed 1/50, ISO 100 သည် သင့်မြတ်သည့် Setting ဖြစ်သည်။ သာမန် Shade ကျနေသည့် မျက် နှာ အတွက် မူ Three-Stop ပိုပေးရန် လိုသည်။
အထက်ပါ နှင်း လျှောစီးသည့် ပုံ ကို အလွန်တောက်ပနေသည် Snow ပေါ်ရှိ Subject ကို ပေ ၁၀၀၀ အကွာ မှ ရိုက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ရိုက်ကူးသည့် Data မှာ f-8, shutter Speed 1/400, ISO 100 ဖြစ်သည်။
အထက်ပါ ဆိုင်ကယ် စီးနေသည့် ပုံကို တိမ်ဖုံးနေသည့် အချိန် သို့သော် အရိပ် ကိုမြင် နိုင်သေးသည့် အလင်းရောင် အခြေအနေတွင် ရိုက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ နေရောင် တောက်နေသည့် အနေအထား တွင် ရိုက်သည့် Sunny 16 ထက် Two-Stop အလင်း ပို ပေးရန် အကြံပြု လိုသည်။
လက်ရှိ ရိုက်ထားသည့် Data မှာ f-8, Shutter speed 1/400, ISO 400 ဖြစ်၍ f-5.6, Shutter Speed 1/800, ဖြင့် လည်း ရိုက် နိုင်သည်။
အထက်ပါ ပုံ တွင် အလင်းရောင် လျှော့ နေသော်လည်း မြင်း၏ အရိပ် ကိုမြင်နိုင် သည့် အလင်း အရောင် အခြေအနေ တွင် Two- Stop အလင်း ကို တင် ထား ပေး သည်။ Sunny 16 အခြေအနေ မှ Aperture f-11, Shutter Speed 1/ 200, ISO 400 ဖြင့် ရိုက်ထားသည်။ အကြမ်း ဖျဉ်း ဆိုရပါက Aperture ကို တစ်ဆင့် ပိုဖွင့် ကာ Shutter Speed ကိုလည်း ပို၍ အချိန် ကြာ ပေး လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အလင်းရောင် နှင့် အရိပ် ကျသည့် အနေအထားပြ ဇယား
Dark with Sharp edges.
Open Shade/ Sun Set
သာမန် နေရောင်တောက်နေသည့် အခြေအနေတွင် Aperture ကို Sunny 16 မဟုတ်ဘဲ အပြောင်းပြောင်း အလဲလဲ လုပ်ကာ ရိုက် နိုင်သည့် Setting အတွဲ ကို အောက်ပါ ဇယား တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။ ယင်းတို့ မှာ အထက်တွင် ဆိုခဲ့ သည့် အတိုင်း Guide Line မျှသာ ဖြစ်သည် ကိုသတိပြု ရန် လိုပါမည်။
အောက်ပါ ဇယား သည် အဆိုပါ Setting အတွဲ တွင် ISO အမှတ် 100, 200, 400 တွင် ထားရမည့် Aperture နှင့် Shutter Speed အတွဲများကို ဖေါ်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။
Aperture is Narrow and Shutter Speed is Slow
Aperture is Wider and Shutter speed is Faster
Source Jim Pickrell’s Table
အထက်ပါ ဇယား ကိုကြည့်ပါ က အလွန်ကျယ်သည့် Aperture များ မှ လွဲ၍ ကျန် Aperture များ one Step ပြောင်း ကာ ကျယ် လာသည် နှင့် Shutter Speed အပိုင်းကိန်းများ၏ အောက်ကိန်းဖြစ်သည့် ပိုင်းခြေသည်လည်း နှစ်ဆ တိုးလာသည် ကိုတွေ့ ရမည် ဖြစ်သည်။
Sunny 16 Rule သည် အစ မျှသာ ဖြစ်သည်။ အထက်ပါ ဇယား အတိုင်း Aperture ကို အမျိုး မျိုး ပြောင်းလဲ ခြင်း ဖြင့် Aperture ကျဉ်းကျဉ်း ဖြင့် ရိုက်ပါက အထက်ပါ ပုံ ကဲ့ သို့ Large Depth of Field ဖြင့် ပုံ မျိုး ရနိုင်သည်။
Sunny 16 Rule ကို ရေးသားနေသော် လည်း အခြားသော Rules များရှိသေးသည်။ Rules ဟု တင်စား ပြော ဆိုသော်လည်း စင်စစ် အားဖြင့် အလင်းရောင် အခြေအနေ တစ်ရပ် နှင့် ယှဉ်တွဲ ကာ အကြံပြု ထား Aperture များသာ ဖြစ်သည်။
· The snowy/sandy - F/22 rule.
· The overcast - F/8 rule.
· The slightly overcast - F/11 rule.
· The heavy overcast - F/5.6 rule.
· The sunset - F/4 rule.
အောက်ပါ ဇယား မှာမူ အလင်းရောင် အခြေ အနေ များကိုသာ မက ISO များကိုပါ တွဲ၍ ဖေါ်ပြ ထားသည့် ပို၍ အသေးစိတ်သည့် Guide Line ဇယား ဖြစ်သည်။
Aperture အမှတ် အသား ၏ ကိန်းစဉ်များ။
အထက်ပါ Nikon 35mm 2D Lens ၏ Aperture အမှတ် အသား ကိန်းစဉ် များကို ကြည့်ပါက f-2, f-2.8, f-4, f-5.6, f-8, f-11, f-16, f-22 စသည်ဖြင့် တွေ့ ရမည် ဖြစ်သည်။ ဤ ကဲ့ သို့ ကိန်းစဉ် ဖြစ် ပေါ် ရ ခြင်း မှာ (The powers of the square root of2) တွက် နည်း ကြောင့် ဖြစ်သည်။
ယင်းတွက် နည်း မှာ Square Root2( ) ၏ ထပ် ညွှန်းကိန်း ( Power) ကို တစ်ဆစီ တိုး ၍ တွက်ချက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ပို၍ ရှင်းလင်းစေရန် အောက်တွင် နမူနာ အဖြစ် တွက်ပြ ပါမည်။
Powers of Square root of2( )
၏ တန်ဘိုး မှာ 1.414 ဖြစ်သည်။
= 1.414 to the Power 1= 1.414 nearest f-1.4
= 1.414 to the Power 2= 1.999 nearest f-2
= 1.414 to the Power 3= 2.827 nearest f-2.8
= 1.414 to the Power 4= 3.997 nearest f- 4
= 1.414 to the Power 5= 5.652 nearest f- 5.6
= 1.414 to the Power 6= 7.992 nearest f-8
= 1.414 to the Power 7= 11.30 nearest f-11
= 1.414 to the Power 8= 15.98 nearest f-16
= 1.414 to the Power 9= 22.59 nearest f-22
= 1.414 to the Power 10= 31.942 nearest f-32
( 1.414 to the Power2ဆိုသည်မှာ 1.414 ကို 1.414 နှင့် မြှောက်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး to the Power 10 မှာမူ 1.414 ကို ဆက်တိုက် ၁၀ကြိမ် မြှောက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ )
အထက်ပါ တွက်ချက် နည်းတွင် အဖြေ၏ ဒဿမ ကိန်းတွင် 0.5 အထိကို ကိန်းတစ်လုံး တိုး၍ မယူ ဘဲ 0.5 ကျာ်မှ သာ Nearest တွင် ကန်း တစ်လုံး တိုးယူ သည်ကို တွေ့ နိုင်သည်။ ဥပမာ 22.59 ကို Nearest ကိန်းအဖြစ် 22 သာ ယူကာ 3.997 ၏ Nearest ကိန်း ကိုမူ4သို့ တိုး ယူ ထားပါသည်။
အချုပ် အားဖြင့် ထပ်မံ ရေးသားရပါက ဓါတ်ပုံသည် အနုပညာ ဖန်တည်း မှု သာ ဖြစ်သောကြောင့် နည်းဥပဒေသ များစွာ ရှိသော်လည်း အားလုံး ကိုမူသေ ယူ၍ မရ သည်ကို သတိပြုရန် လိုပါသည်။ အခြေအနေ အချိ်န်အခါ မိမိ၏ ခံစားမှု စသည့်အချက်များသည် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရာတွင် အရေးကြီးသည့် အချက်များ ဖြစ်ကြောင်း ဖေါ် ပြလိုပါသည်။
Posted by Soe Hlaing at 00:40